Sere Jokes in Nepali - Nepali Me
Sere Jokes in Nepali
७ महिनाको माया
( शेरेलाई उनको प्रेमीकाले प्रश्न )
बाउ : तिमीले मेरो छोरीलाई साँचीक्कै माया गर्छौ ?
शेरे : अँ गर्छु । पछिल्लो ७ महिना देखी गरीराको छु ।
बाउ : म यो कसरी विश्वास गरुँ ?
शेरे : अब २ महिना कुर्नुस न । आफै विश्वास हुन्छ ।
शेरेको बुढीलाई ५ करोडको चिट्ठा परेछ । त्यसैले चिट्ठा कम्पनीले निर्णय गरेछ एकै पल्ट यस्तो खबर सुन्दा शेरेको बुढी खुसीले ज्यान जान सक्छ, त्यसैले कम्पनीले एउटा बाबालाई यो कुराको जिम्मा दिएछ ।
बाबा शेरेको घर गएछ र घरमा शेरेको बुढीलाई हात हेर्दिन्छु भनेछ,
हात हेर्दै भनेछ, ‘‘ सोच तिमीलाई ५ करोडको चिट्ठा परेछ, अब तिमी के गर्छौ ?
शेरेको बुढीः ५ करोड पाएँ भने, तपाइँको अगाडी डान्स गर्छु, तपाइँ सँगै माया लगाउछु, तपाइँ सँगै बिहे गर्छु, आदी पैसा तपाइँलाई दिन्छु
यती भन्दै शेरेको बुढी बाबालाई हेर्छे तर बाबा अगिनै सेन्टी फ्लयाट …..
शेरेले एकदिन होटेलबाट रक्सी ल्याएर बुढीलाई पिउन भन्यो ।
त्यसैले बुढीले मुखमा हाली र मुख बिगार्दै भनि, ‘छि छि के हो यस्तो । कस्तो नमिठो ।’
अनिशेरेले भन्यो, देखिस् । तेरो बुढोले कति न मिठो खाएर आउँछ भन्ने सोचेको थिइस् नि । कम गारो छ मलाई।
सोच र विचार
एकदिन कक्ष्या कोठामा मा शिक्षकले नेपाली पढाउदै गर्दा शेरे निकै हल्ला गर्छ र शिक्षक्ले उसलाई प्रश्न गर्छन।
शिक्षक : सोच र विचार के फरक छ भन् त ?
शेरे : तपाईको छोरी सेक्सी छ, यो हाम्रो सोच हो, तर उ हाम्रो हातबाट बचोस् भन्ने तपाईको विचार हो ।
( शेरे र थापा आफ्नो बाउको बारेमा गफ लगाउदै )
थापा : हाम्रा बा यति होशियार छन् सलाई किन्दा बट्टा खोलेर गन्छन् ।
शेरे : तेरा बा के होशियार ? हाम्रा बा त सलाई किन्दा झन् सबै काँटी बालेर चेक गर्छन् ।
शेरे चिया खान गएछ । एक कप चिया मगाएर २–३ सर्को पिएपछि, त्यसमा माखा देखेछ र पसलेलाई भनेछ ।
शेरे : ओ साहुजी, अर्को चिया लेउ । यसमा त माखा परेको रैछ । धन्न जुठो हाल्नुभन्दा अगाडीनै देखेछु ।
(साहु त्यहाँ आएर कप हेरेछ र भनेछ)
साहु : तपाईले त जुठो हालिसक्नुभएछ । अर्को कपको त पैसा फेरी लाग्छ है ।
शेरे : हैत् । कता जुठो हाल्नु । मैले छोको त छैन ।
साहु : किन ढाँटनुभाको । मैले थाहापाउन्न र ? यो चियामा सुरुमा २ वटा माखा थियो । अहिले एउटा मात्र छ ।
( शेरेले लगातार एक वर्ष तपस्या गरेपछि शिव भग्वान प्रकट हुनुभएछ )
शेरे : प्रभु एउटा बाइक 🚲 दिनु प¥यो ।
प्रभु : आफु त यहाँ साँढे 🐄 चढेर हिडी राखेछु । तिमलाई कसरी बाइक दिने ? अरु केहि माग् ।
शेरे : उसो भए हाम्रो देशको नेताहरुलाई बुद्घि दिनुस् ।
प्रभु : ओहो ! कस्तो नसकिने कुरा मागेको । बरु भन कुन कम्पनीको बाइक चाहियो ।
साबुन छ नि ?
(शेरे पसल जाँदा)
शेरे : साहुजी ! साबुन छ नि ?
पसले : छ नि । कुन साबुन हो ?
शेरे : राम्रो डेटोलको साबुन छ ?
पसले : छ नि ।
शेरे : उसो भए त्यो साबुाले ५ मिनेटसम्म हात धोएर मलाई १ केजी चिउरा जोखदेऊ ।
(शेरेले गाजा तान्दै गर्दा पुलिस आएछ)
पुलिस : ओ भाइ तलाई जेलमा हाल्दिम ?
शेरे : भर्खरै नुहाएर आको बरु ज्यानमा तेल चैँ हाल्देउन ।
(अदालतले २५ दिन पछि फाँसी दिने फैसला गरेपछि शेरेलाई जेलमाराखियो । तर, भोलिपल्ट बिहानै एक सिपाहीले शेरेलाई बोलाउँदै भन्यो)
सिपाही : ल हिँड् शेरे । तँलाई आजै फाँसी दिने निर्णय आयो ।
शेरे : होइन, अदालतले त मलाई २५ दिनपछि मात्रै फाँसी दिने फैसला गरेको थियो नि।
सिपाही : हो हुन त। तर तँ जेलर साबको गाउँको मान्छे भएकोले तेरो काम छिटो गर्ने आदेश छ, छिटो हिँड् । 😁😁😁😁😁
शेरेले एउटी केटीलाई धेरै माया गर्थ्यो तर भन्न डराएर केही भन्न सकेको थिएन ।
एक दिन उसले म्यासेजमा I Love You लेखेर केटीलाई पठाउने निर्णय गरेछ ।
उसले राती केटीको नंबरमा म्यासेज पठाएछ ।
केही समय पछि शेरेको मोबाइलमा म्यासेजको रिङटोन बजेछ तर उसले भोलिपल्ट बिहान नुहाईधुआई गरेर मन्दिर गएर मात्र म्यासेज पढ्ने निर्णय गरेछ र सुतेछ ।
रात भरि केटीकै सपना देखेछ ।
बिहान उठेर नुहाएछ र मन्दिर गएछ । अनि मन्दिर गएर आएर म्यासेज पढेको त यस्तो लेखेको रैछ :
“तपाइको पैसा सकिएको कारणले म्यासेज जान सकेन। कृपया पुन रिचार्ज गरेर फेरि कोसिस गर्नुहोला।”
शेरेको रमाइलो तपस्या
( शेरेको तपस्या सुनेर भगवान खुसी भएर उसको अगाडी आएर भन्नुभएछ )
भगवान : भन बालक तिमीलाई के चाहियो ?
शेरे : एउटा जागिर, अनि गाडी र गाडीमा केटीनै केटी चाहियो भगवान ।
भगवानले तथास्तु भन्नुभएछ र अहिले शेरे केटी मात्र पढ्ने स्कुल को बस डाइभर
घडी हेर्नै आउँदैन
( बाउले शेरेलाई सोध्यो )
बाउ :शेरे कति बज्यो ? गएर घडी हेर् त ?
शेरे : बुवा मलाई त घडी हेर्नै आउँदैन ।
बाउ : त्यसो भए ठूलो सुई र सानो सुुई कहाँ–कहाँ छन्, हेरेर आइज ।
( घडी हेरेर आइसकेपछि )
शेरे : घडीको दुबै सुई घडीभित्रै छन् ।
(शेरेले अटो वालालाई 🚕 बोलाएर सोधेछ)
शेरे : दाई, राम मन्दिर 🛕जानुहुन्छ ?
अटो वाला : जान्छु नि। बस न।
शेरे : हैन। म जान पर्दैन। फर्किदा मलाई पनि प्रसाद लेराउनु है।
( डाक्टरले अपरेशन पछि )
डाक्टर : लौ अघि लगाएको टाँका फेरी खोल्न पर्ने भो ।
शेरे : किन र डाक्टर शाहब ?
डाक्टर : अघि अपरेशन गर्दा एउटा कैँची ⚔ तपाईको ज्यान भित्र छुटेछ ।
शेरे : ह्या जाबो एउटा कैँचीको नि के लोभ गरेको । बरु म आफै त्यो कैँचीको पैसा 💸 दिउँला ।
( शेरे र उनको प्रेमी विच म्यासेज हुँदै )
शेरे : प्रिय यदि तिमी हाँसीरहेको छौ भने मलाई अलिकति तिम्रो मुस्कान पठाउ, तिमी रोइरहेको भए अलिकति तिम्रो आँसु पठाउ, यदि निदाइरहेकी भए मलाई मिठो सपनी पठाऊ ।
प्रेमिका : म त अहिले ट्वाइलेट मा छु । के पठाम ?
शिक्षकले गृहकार्य हेर्दै गर्दा शेरे को पालो आयो र उसको उत्तर चेक गर्नुभयो । तर शिक्षकलाई शेरेले उत्तर अर्कैको सारेको जस्तो लाग्यो र सोध्नुभयो ।
शिक्षक : तिम्रो उत्तर किन अरुकै उत्तर सगँ मिल्छ त? 😠
शेरे : अरे मिस । तपाईले सबैलाई एउटै प्रश्न गर्नुभएपछि उत्तर पनि त एउटै आउँछ नि । 👦😜
( शिक्षक त शेरेको उत्तर सुनेर बेहोस )
गित गाउने प्रतियोगिता
एकदिन गित🎶 प्रतियोगिता गाउने शेरेले पनि भाग लिएछ । तर उसलाई खासै गित गाउन भने आउँदैन रहेछ ।
उ भन्दा पहिलेकोले यस्तो गित गाएछ:
साननानीले आँखा छोपेको
आउँछ अझै झझल्को”
अब शेरे को पालो आएछ, तर के गाउने थाहानै थिएन । उसको पालो अघिकोले गाएको गितलाई हल्का परिवर्तन गरेर यस्तो गित गाएछ ।
श्रिमतिले डाडुले हानेको
दुख्छ अझै टुटिल्को ।”
शेरे : अंकल मलाई एउटा जागिर मिलाई दिनु पर्यो ।
मन्त्री : मेरो पिउन बन, १ लाख आउँछ ।
मनोज : अलि सानो जागिर के, अंकल ।
मन्त्री : पार्टीको जिल्ला ईन्चार्ज बन ८० हजार आउँछ !
मनाज : ह्या अंकल १५–२० हजार आउने खाल्को के !
मन्त्री : बाबु त्यस्तो जागिरको लागि त धेरै पढ्नु पर्छ, मेहेनत गर्नुपर्छ ।
रक्सी किन पिउँछस ?
पुलिस : हैन । तैले यति धेरै रक्सी 🍺किन पिउँछस ?
शेरे : बाध्यता सर । बाध्यतामा पिएको हो ।
पुलिस : तलाई के को बाध्यता भन त ?
शेरे : बोतलको बिर्को नै हरायो । अनि पिउन परेनत् ।
शेरे र मुन्द्रे
शेरे : आज मलाई १० जनाले कुटे नि !
मुन्द्रे : अनि तैँले केहि गरिनस्, शेरे ।
शेरे : मैले नि भनिदिएँ, हिम्मत भए एक–एक गरेर आओ।
मुन्द्रे : अनि…..
शेरे : अनि फेरि एक–एक गरेर १० जनाले कुटे।
जिन्दगी २ दिन को
(शेरे ज्योतिसको मा हात हेराउन गएछ)
जोतिस : बालक ! जिन्दगी २ दिन को हो ।
शेरे : ला ! मैले त हिजो भर्खर १ हप्ताको डाटा प्याक लिगे नि त ।
( ज्योतिस ठाउँको ठाउँ बेहोस् )
कस्तो देखिएको छु
( शेरेको बुढी मज्जाले बसेर टि.भि मा cricket म्याच हेर्दै थिईन । शेरे नयाँ लुगा लगाएर तेहाँ बुढीको छेउमा उभिएर भन्यो )
शेरे : ए बुढी यता हेर त, म कस्तो देखिएको छु भन त ।
बुढी – चिच्याएर, छक्का छक्का ।
(शेरे छक्क पर्यो )
( शेरेको बाउले गणितको प्रश्न गर्दै )
बाउ : भन् त छोरा ७ पछि कति आउँछ ?
शेरे : ७ पछि ८,९,१० आउँछ ।
बाउ : स्याबास् । मेरो छोरा निकै तगडा छ । अनि १० पछि नि ?
शेरे : १० पछि – गुलाम, मिस्सी, बादशाह अनि एकका आउँछ ।
शेरे र तिन पागल
( शेरेको दिमाग खुस्किएपछि उपचारका लागि उसलाई मानसिक अस्पतालमा राखिएछ । अस्पतालको तीन जना पागलसँग शेरे त्यहाँबाट कसरी भाग्ने भन्नेबारे छलफल गर्दैरहेछन् )
पहिलो पागल : अब यहाँबाट नभागी भएन, तर कसरी भाग्ने ?
दोस्रो पागल : पर्खाल निकै अग्लोरहेछ भने हामफालेर भागौँ ।
तेस्रो पागल : पर्खाल निकै मोटोरहेछ भनेचाहिँ पर्खाल प्वाल पारेर भागौँ ।
चतुरे : हामी भाग्न नसक्ने भयौँ यार ।
तीन पागल (एकै साथ) : किन नि ?
शेरे : मैले बिहान हेरेको, त्यहाँ पर्खाल नै रहेनछ ।
(शेरेले मिसलाई जिस्काउदै)
शेरे : मिस तपाईले मेरो फोनमा कल गर्नु भएकोथियो ?
मिस : हैन । गरेको छैन । किन र ?
शेरे : हिजो मेरो फोनको स्क्रीनमा मिस कल लेखेको थियो ।
गोरुले के दिन्छ ?
( शिक्षकले शेरेलाई प्रश्न सोध्दै थियो )
शिक्षक : कुखुरीले 🐔के दिन्छ ?
शेरे : अण्डा ।
शिक्षक : राम्रो, अनि खसीबाट🐐 के पाइन्छ ?
शेरे : मासु ।
शिक्षक : साह्रै राम्रो । अनि गोरुले 🐄चाहिँ के दिन्छ ?
शेरे : होमवर्क । 😜 🤪😜 🤪
झुट समाउने मेसिन
एकदिन शेरेको बाउले आफ्नो घरमा एउटा रोबोट लिएर आएछ । त्यो रोबोटले झुटो
बोलेको पत्ता लगाउँथ्यो र झट बोल्नेलाई गालामा एक झापड हान्थ्यो ।
शेरे : बा । आज म स्कुल जान्न । कस्तो सन्चो नहोला जस्तो छ।
(रोबोटले यसले झटो बोलेको पत्ता लाउँछ र शेरेलाई गालामा एक झापड हान्छ )
बाउ: देखिस त् । झुटो बोल्यो भने के हुन्छ भनेर ? मेरो पालमा त मलाई झुट के हो भन्ने पनि थाहा थिएन ।
(रोबोटले बाउलाई एक थप्पड दिन्छ र शेरे मज्जाले हार्छ।
(लामो समय शेरे गिफ्ट पसलमा सामान हेरेछ र अन्तिममा एउटा सामान मन परेछ र सोधेछ)
शेरे : यो मिठो हाँसेको देखेको कुकुरको कति पर्छ नि ?
साहु : (दङ्ग पर्दै ) भाई, यो त अैना पाे हाे त ।